Apple yakaburitsa yechina beta ye macOS High Sierra 10.13.5 yevagadziri | Ndinobva mac
Apple yakaburitsa iyo yechina beta ye macOS High Sierra 10.13.5 yevagadziri
Apple ichangoburitsa iyo yechina beta yeiyo macOS Yakakwira Sierra 10.13.5 inotevera inovandudza yevagadziri vhiki imwe mushure mechitatu beta uye unopfuura mwedzi mushure mekuburitswa kwemacOS High Sierra 10.13.4.
Iyo nyowani macOS High Sierra 10.13.5 beta inogona kutorwa pasi kuburikidza neApple Developer Center kana kuburikidza neye software yekugadzirisa mashandiro paMac App Store. ine yakafanira mbiri yakaiswa.
MacOS Yakakwira Sierra 10.13.5 inosvitsa rutsigiro rweMeseji muICloud, chinhu chaimbove chiripo mune macOS High Sierra 10.13.4 betas uye akarega basa pamberi pekuburitswa. Meseji muICloud inowanikwawo muIOS 11.4.
Iwo maMessage muICloud ficha yakagadzirirwa kuchengetedza yako iMessages muICloud kuitira zviri nani kuwiriranisa. Panguva ino, inouya iMessages inotumirwa kune ese madhijitari kwaunopinda iwe kune yako Apple ID, asi haisi yechokwadi gore-based sync nekuti mameseji ekare haana kuratidzwa pamidziyo mitsva.
ICloud Meseji zvakare inobvumidza ako ekare maMessage uye zvakabatanidzwa kuchengetwa muICloud pane pane yako iPhone, iPad, kana Mac, kuchengetedza yakakosha nzvimbo yekuchengetedza.
Iyo yekuvandudza inosanganisirawo kugadzirisa bug uye kugadzirisa mashandiro eenyaya dzisina kutaurwa. pane macOS Yakakwira Sierra 10.13.4Asi sezvo Apple isingape zvakadzama manotsi ekuburitsa mu macOS High Sierra betas, isu tinogona kusaziva chaizvo zviri mune iyi nyowani beta kudzamara data rekuvandudza richitanga kudarika.
Hapana shanduko huru yekunze inowanikwa mune yekutanga matatu mavhezheni e macOS High Sierra 10.13.5, saka tichava Ive nekuchenjerera kana mune ino nyowani beta pane zvekutaura mune izvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Apple yakaburitsa iyo yechina beta ye macOS High Sierra 10.13.5 yevagadziri
Beta yechina yeTVOS 11.4 ikozvino iri mumaoko evanogadzira
Tsvaga chero faira paMac yako naTembo 2